Hungari - Wikipedia
Location of Hungari (dark green)
Hungari (Magangalyo: Magyarország [mɒɟɒrorsaːɡ] (ku saabsan codkan maqalka)) waa waddanka Midowga Yurub kaas oo daboolaya aagaga 93,030 kiilomitir oo kiiloomitir ah (35,920 sq m) ee xayiraadda Carpathian, oo xuduud u leh Slovakia ilaa waqooyiga, Ukraine ilaa waqooyi-bari, Awstaria ilaa galbeed, Romania ilaa bari, Serbia koonfur, Croatia koonfur-galbeed, iyo Slovenia ilaa galbeed. Iyadoo ku dhowaad 10 milyan oo qof, Hungari waa mid dhexdhexaad ah oo ka tirsan Midowga Yurub. Luuqadda rasmiga ah waa Hungarian, oo ah luqadda Uraliga ee ugu ballaaran dunida oo dhan. Magaalada caasimadda Hungary iyo magaaladeeda ugu weyn iyo magaalooyinka waawayn waa Budapest, waa xarun dhaqaale oo weyn, oo loo aqoonsado inay tahay magaalada ugu weyn caalamka. Meelaha waaweyn ee magaalooyinka waxaa ka mid ah Debrecen, Szeged, Miskolc, Pécs iyo Győr.
Ka dib qarniyadii hoyga guusha ee Celts, Romans, dadka reer Jarmalka, West Slavs, iyo Avars, aasaaskii Hungari waxaa la dhigay qarnigii 9aad ee Prince Árpád oo ah guusha Carpathian Basin. Isticmaalkeedii weynaa ee Stephen waxaan ku koray carshigii 1000, isaga oo u beddelay boqortooyada Masiixiga. Qarnigii 12aad, Hungary waxay noqotay awood dhexe oo ka dhexjeeda dunida galbeedka, gaarey da 'dahab qarnigii 15aad. Ka dib Dagaalkii Maanta ee 1526 iyo 150 sano oo ka mid ah shaqooyinkii Iiraan (1541-1699), Hungary waxay ku hoos jirtay xukunkii Habsburg, kadibna waxay Awoodda Awoodda Australiyaanka ah ee Australiya iyo Australiya la wadaagtay Austria.
↑ 6.0 6.1 6.2 6.3 Cite error: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named imf2
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Hungari&oldid=226439"